Uxolo lwe-Wentworth A-Isakhelo w/ I-Hot Tub kunye ne-Starlink - I-Airbnb
Uxolo lwe-Wentworth A-Isakhelo w/ I-Hot Tub kunye ne-Starlink
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguJessy
Siyakumema ukuba uhlale kwindawo yethu entle enamagumbi amabini e-A-Frame ebekwe kumbindi we-Wentworth Valley. Yiya ngaphandle kwaye ulayite umlilo, ubeke irekhodi, uze utsibe kwi-tub eshushu. Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukusuka eSki Wentworth kunye nemizuzu engama-20 ukuya eTatamagouche. Intlambo yaseWentworth yindawo engafunyaniswanga yeli phondo ehamba intaba, iingxangxasi, ukuloba, iindlela zeATV kunye neyona ndawo ibalaseleyo yokutyibiliza empuma yeQuebec.
Le ndawo inekhitshi egcwele ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala kunye nempahla.
Nceda uqaphele ukuba inkonzo yeselula ayifumaneki kubo bonke abathwali kwiKhabhinethi. Abanye abantu bayayithanda le nto malunga nekhabhinethi. Kubantu abafuna inkonzo yeselfowuni (njengoko senzayo xa sisebenza ukude kwikhabhini), sicebisa ukuba wenze umsebenzi obizwa ngokuba 'ngumnxeba we-WiFi' kwi-iPhone yakho okanye kwifowuni ye-Android ukuze ukwazi ukufowuna kunye ne-SMS nge-intanethi yethu. Kulula kakhulu ukwenza kwaye sinokukunika imiyalelo malunga nendlela yokwenza!
Uyimizuzu emi-5 ukuya eSki Wentworth. Ngaphakathi kwemizuzu eli-10, uyakufika kwiNdlela yokuHamba ePhezulu, kwiingxangxasi zaseWentworth kunye neMarike yaseWentworth (kubandakanywa neNSLC).
Ngaphakathi kwe-20-30 Minutes, ungafika eTatamagouche, Fox Harb'r naseWallace. Ngemizuzu engama-45, uyakufika kwiiFama zeNyanga yeShukela!
Umbuki zindwendwe ngu- Jessy